के पुरुष र महिला फरक फरक रंग मन पर्छ? | Martech Zone
हामीले केही उत्कृष्ट इन्फोग्राफिकहरू प्रदर्शन गरेका छौं कसरी र colors्गहरू खरीद व्यवहार असर। किसिमेट्रिक्सले पनि विकसित गरेको छ इंफोग्राफ़क यसले एक विशिष्ट लि target्गलाई लक्षित गर्न केही इनपुट प्रदान गर्दछ।
म भिन्नतामा छक्क परें… र त्यो सुन्तलाले हेर्यो सस्तो!
र Color र लिंगमा अन्य निष्कर्षहरू
नीलो सबैभन्दा सामान्य छ मनपर्ने रंग दुबै पुरुष र महिला बीच।
हरितले युवावस्था, खुशी, न्यानोपन, बौद्धिकता र उर्जाको भावनाहरू हटाउँदछ।
पुरुषहरू उज्यालो रंगतर्फ गुरुत्वाकर्षण गर्दछन्, जबकि महिलाहरू नरम टोनमा ग्रेभेट गर्छन्।
२०% महिलाले खैरो नामको उनीहरूको कम्तिमा मनपर्ने रंगको रूपमा
त्यस दिनदेखि कि बच्चाहरूलाई घर ल्याईन्छ र तिनीहरूका गुलाबी वा निलो कम्बलमा राखिन्छ, लिंग र र about्गको बारेमा प्रभाव पारिएको छ। जहाँ रंगहरू विशेष रूपमा स्त्रीलिंगी वा मर्दानी हुन् भन्ने बारेमा कुनै ठोस नियमहरू छैनन्, जबकि विगत सात दशकहरूमा त्यहाँ अध्ययन गरिएको छ जसले केही सामान्यीकरणलाई आकर्षित गर्दछ।
रंगले उपभोक्ताहरूको विचार र व्यवहारमा अविश्वसनीय प्रभाव पार्न सक्छ। र अगाडि, यसले लि by्गबाट ​​प्रभाव लिन सक्छ।
टैग: अच्रोमेटिककेलानीलोचम्किलो रंगखैरोबबलगमCantaloupeकार्नेशनcayenneसस्तोcloverरंगबैंगलोरमनपर्ने रंगमहिलाfernवनस्पतिलिङ्गअंगूरहरियोहनीड्यूअप्रभावीचुम्बनलेभेंडरकम्तिमा मनपर्ने रंगनींबूचूनेम्याजेन्टापुरुषमरास्चिनोmaroonमशसुन्तलाआर्किडगुलाबीआलुबखडाबैजनीलालसामनसमुद्री फोमरंगहरुआकाशनरम रंगस्पिन्ड्रिफ्टवसन्तस्ट्रबेरीसुन्तले रङtealटिन्ट्सफिरोजा
प्रभाव र विज्ञापन ब्लकि? को विकल्प के हो?
सेप्टेम्बर १,, २०११ 5::2017० अपराह्न
यी पाई चार्टहरू धेरै भ्रामक छन्। तपाईं एकै पाई चार्टमा दुबै मनपर्ने र कम से कम मनपर्ने रंग प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ जुन कुनै अर्थ छैन। पाई चार्टले सम्पूर्णको अंश मात्र देखाउँदछ, र यस अवस्थामा "मनपर्ने" र "कम मनपर्ने" दुई फरक "wholes" हुन्।